यी १० फिचर, जसले जोगाउनेछ तपाईंको स्मार्टफाेन
काठमाडौं । तपाईंले प्रयोग गर्ने फोन कतिको सुरक्षित छ वा छैन भन्ने कुरा तपाईंले नै फोन प्रयोग गर्ने तरिकामा निर्भर हुन्छ । विशेषगरी विभिन्न फिशिङ तथा ह्याकिङजस्ता साइबर आक्रमणबाट आफ्नो फोनलाई कसरी स...
techpana.com . ११ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा पाँच अर्ब खर्च
काठमाडौं । देशभरका सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा पुर्‍याउने गरी सुरु गरिएको ब...
सुरु भयो नेपाल ई-स्पोर्टस च्याम्पियनशिपको टिम दर्ता, जित्नेले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल ई-स्पोर्टस एसोसियसनको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल ई-स्पोर्टस च्याम्पियनशिपका लागि टिम दर्ताको काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्तरको याे गेमिङ प्रतिस्पर्धामा डोटा-टु, टेकन-सेभेन, पब्जी म...
techpana.com . १६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
सरकारले मोबाइल आयातमा अन्त शुल्क बढाउने तयारी गरेसँगै व्यवसायी आतङ्कित
काठमाडौं । सरकारले आउँदो आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । सोही बजेटमार्फत सरकार मोबाइल आयातमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क वृद्धि गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै व्यवसायीले त्यसको वि...
काठमाडौं विश्वविद्यालय र विद्युत प्राधिकरणबीच हाइड्रोजन प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन र जलविद्युतको राम्रो उपयोग गर्न हरित हाइड्रोजन प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भएको छ । विश्वविद्यालयका उ...
साओमीले सार्वजनिक गर्‍यो १९ मिनेटमै फूल चार्ज हुने स्मार्टफोन, कति छ मूल्य ?
काठमाडौं । साओमीले १९ मिनेटमै फुल चार्ज हुने स्मार्टफोन रेड्मी नोट ११ टी सिरिजका स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एक कार्यक्रममार्फत नोट ११ टी प्रो र नोट ११ टी प्रो प्लस सार्वजनिक गरेको हो ।...
स्वदेशी उत्पादन प्रबर्द्धन गर्न दराजको ‘प्राउड्ली नेपाली’ अभियान
काठमाडौं । ई–कमर्स प्लेटफर्म दराजले स्वदेशी उत्पादन प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘प्राउड्ली नेपाली – प्रोमोटिङ नेपाली ब्रान्ड’ नामक अभियान आजबाट सुरु गरेको छ । यो अभियान मार्फत कम्पनीले नेपाली ब्रा...
techpana.com . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त माग
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त माग गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले विगत एक महिनादेखि रिक्...
बम्पर अफरको नाममा प्रयोगकर्तालाई म्यासेज, प्राधिकरणले सुरु गर्‍यो अनुसन्धान
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बम्पर अफरको नाममा प्रयोगकर्ताको मोबाइल आएको म्यासेजलाई लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पछिल्लो केही दिन यता प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा ‘बम्पर अफर दि इयर’ भन्दै म्या...
राहदानी विभागको अनलाइन आवेदनमा प्राविधिक समस्या
काठमाडौं । राहदानी विभागको प्रि-इनरोलमेन्ट पोर्टलमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ । सेवाग्राहीहरूले राहदानीको लागि अनलाइन आवेदन दिने पोर्टलको सर्भर डाउन भएको हो । विभागले भने सफ्टवेयर अपडेट गर्ने क्...
techpana.com . २१ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
एनभिदियासँग मिलेर ५०० हर्ज रिफ्रेश रेट भएको विश्वकै पहिलो गेमिङ डिस्प्ले ल्याउने असुसको घोषणा
काठमाडौं । असुसले एनभिदियासँगको सहकार्यमा विश्वकै पहिलो ५०० हर्ज रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले ल्याउने घोषणा गरेको छ । मङ्गलबारबाट सुरु भएको कम्प्युटेक्स २०२२ कार्यक्रममा यो डिस्प्ले ल्याउने घोषणा गरेक...
techpana.com . २४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
आइतबार पनि ई-पासपोर्ट वितरण हुने
काठमाडौं । राहदानी विभागले आइतबार पनि विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले जेठ १ गते देखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालयहरू शनिबार र आइतबार बिदाको घोषणा गरेको थियो । यद्यपि सेवाग्राहीको चा...
ट्वीटरको सञ्चालक समितिबाट संस्थापक ज्याक डोर्सीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । ट्वीटरका पूर्व सीईओ ज्याक डोर्सीले कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट राजिनामा दिएका छन् । गत वर्षको अन्त्यबाट कम्पनी प्रमुखको भूमिका छाडेका डोर्सीले अब भने बोर्डबाट समेत बाहिरिने निर्णय गरेका हु...
डिशहोमको एसएमई इन्टरनेट प्याकेजः एफयूपी नलाग्ने र उच्च गतिको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ पाइने
काठमाडौं । डिशहोम फाइबरनेटले साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि एसएमई प्लान सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एफयूपी नलाग्ने प्रिमियम स्टेबल ब्याण्डविथ सहितका आकर्षक प्याकेज ल्याएको हो । जसमा ग्राहकले अनल...
गुगल अलर्टः जसले यसरी बढाउन सक्छ तपाईँको वेबसाइटको ट्राफिक
काठमाडौं । तपाईँको ब्लग वा वेबसाइटमा ट्राफिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। वेबसाइट कस्ता व्यक्तिले भिजिट गर्छन्, के भनेर सर्च गर्छन्, कुन क्षेत्र बाट बढी ट्राफिक आउँछ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण रह...
६००० एमएएच ब्याट्री सहितको सस्तो र आकर्षक स्मार्टफोन रेड्मी १० नेपाली बजारमा
काठमाडौं । चिनिँया मोबाइल ब्रान्ड साओमीले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेड्मी टेन नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सस्तो दरमा उत्कृष्ट उत्पादन ल्याउने लक्ष्यका साथ यो फोन नेपाली बजारमा ल्याएको ह...
फ्रि फायर नेपाल च्याम्पियनशिपको टुर्नामेन्ट फर्म्याट सार्वजनिक, यसरी हुनेछ प्रतियोगिता
काठमाडौं । फ्रि फायर नेपाल च्याम्पियनशिपको टुर्नामेन्ट फर्म्याट सार्वजनिक भएको छ । नेपाली फ्री फायर प्लेयरलाई लक्षित गरी आयोजना हुन लागेको यो टुर्नामेन्ट फर्म्याट गरिनाले भर्खरै सार्वजनिक गरेको हो ...
ह्वावे बन्यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ‘सबैभन्दा छिटो विस्तार हुने’ क्लाउड प्रदायक
काठमाडौं । ह्वावे र आसियान फाउण्डेसनको सहकार्यमा भर्खरैमात्र एसिया प्यासिफिक डिजिटल इनोभेसन कंग्रेस २०२२ सिंगापुरमा सम्पन्न भएको छ । ह्वावेले उक्त कार्यक्रममा आफ्ना ग्राहक, विशेषज्ञ, विद्वान र विश्...
बिटक्वाइन, वानएक्स बेट र बाइनान्स जस्ता कारोबारमा आईएमई पे प्रयोग नगर्न कम्पनीको आग्रह
काठमाडौं । आईएमई डिजिटल सोलुसनले क्रिप्टोकरेन्सी तथा बिटक्वाइन, वानएक्स बेट, बाइनान्स जस्ता गैरकानूनी कारोबारमा कम्पनीको नाम जोडिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन...
फोन पे डिजिटल इकोनमी कन्क्लेभ आयोजना हुँदै, यस्ता छन् बहसका विषय
काठमाडौं । फोन पे डिजिटल इकोनमी कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण आउँदो जेठ २० गते शुक्रबार आयोजना हुने भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा डिजिटाइजेसन तर्फ गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम...
नेपालमा स्टार्टअप विकास गर्न विदेशी लगानी सहज बनाउनुका साथै दीर्घकालिन कर छूट दिनुपर्ने माग
काठमाडौं । सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट विनियोजन गर्दै छ । यस्तोमा प्राविधिक क्षेत्रका हरेक कम्पनीहरूलाई पनि सरकारले सहजताको वातावरण सिर्जना गरिदियोस् भन्ने अपेक्ष...
नेट टिभी बन्यो एन्ड्रोइड टिभीको ‘ग्लोबल पार्टनर’ हुने पहिलो नेपाली सेवाप्रदायक
काठमाडौं । एन्ड्रोइड टिभीको ग्लोबल पार्टनरमा नेपालको आईपी टिभी नेट टिभी समावेश भएको छ । एन्ड्रोइडले विश्वका विभिन्न ठाउँबाट उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउने टिभी तथा स्ट्रिमिङ डिभाइसका ब्राण्डहरूलाई आफ्...
विद्युतको थ्री–फेज लाइन लिन अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । तल्लो तथा माथिल्लो स्तरको थ्री–फेज लाइन लिनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने भएको छ । यसअघि आफ्नो नजिकको वितरण कार्यालयमा गएर निवेदन बुझाउनुपर्नेमा अब भने अ...
फोर्ब्स अन्डर–३० सूचीमा ५ नेपाली
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध म्यागेजिन फोर्ब्सले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने एसियाली मुलुकमा प्रभावकारी काम गर्ने ३० वर्ष मुनीका व्यक्तिहरुको सूचीमा यो वर्ष ५ नेपाली युवा छनोट भएका छन् । फोर्ब्सले सार्वज...
बजेटबाट के चाहन्छन् भुक्तानी सेवा प्रदायक ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम आउँदो आइतबार अर्थात जेठ १५ गते घोषणा गर्दैछ । बजेटको अघि मंगलबार सरकारले आगामी वर्षको लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तु...
जीमेलमा आफ्नो नाम कसरी परिवर्तन गर्ने ?
काठमाडौं । तपाईंलाई याद छ आफ्नो जीमेल अकाउन्ट कहिले बनाउनुभएको थियो ? वा तपाईंको जीमेल अकाउन्ट कसले बनाइदिएको थियो कि ? त्यस समयमा तपाईंले अकाउन्टमा आफ्नो वास्तविक नाम नराखेर अन्य कुनै नाम राख्नुभ...
techpana.com . ३ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
फेसबुक अकाउन्टबिना यसरी प्रयोग गर्नुहोस् मेसेन्जर
काठमाडौं । कुनै बेला फेसबुक धेरैका लागि प्रिय सामाजिक सञ्जाल थियो । अरबौं मानिसले फेसबुक प्रयोग गर्थे । पछिल्लाे वर्षदेखि फेसबुकका सक्रिय प्रयोगकर्ता घटिरहेका छन् । फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्...
गुगल अर्थमा गाडी चलाउँदै विश्वका हरेक कुनामा पुग्न सकिने
काठमाडौँ । जापानी सफ्टवेयर डेभलपर कत्सुवमी कोबायसीले गुगल अर्थबाट खिचिएको स्याटलाइट डेटालाई प्रयोग गरेर ड्राइभिङ सिम्युलेटर’ गेम बनाएका छन् । गुगल अर्थ यस्तो एप हो, जसमा तपाईंहरुले इन्टरनेटको मद्द...
१२० स्पोर्टस् मोडसहित साओमीको ‘मी ब्यान्ड सेभेन’ सार्वजनिक, कति पर्ला मूल्य ?
काठमाडौं । सा‌ओमीले आफ्नो फिटनेस ब्यान्डको नयाँ भर्सन मी ब्यान्ड सेभेन भर्सन सार्वजनिक गरेको छ । मी ब्यान्ड सेभेनमा ठूलो डिस्प्ले, नयाँ वाचफेस, नयाँ फिटनेस फिचर लगायतका नयाँ अपग्रेड थप गरिएको छ । ...
रुस-युक्रेन युद्धका कारण ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने
काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धले आपूर्ति श्रृङ्खलामा प्रभाव पारेपछि विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इन्टरनेसनल इनर्ज...
इन्टरनेट विस्तारमा आक्रामक बन्यो डिशहोम, ग्राहक थप्नेमा पछि परे वर्ल्डलिङ्क बाहेकका सबै कम्पनी
काठमाडौं । डिशहोम फाइबर नेटले इन्टरनेट सेवा विस्तारमा आक्रामक उपस्थिति देखाएको छ । कम्पनीले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा नयाँ ग्राहक बनाउने मामिलामा वर्ल्डलिङ्क बाहेकका सबै कम्पनीहरूलाई माथ खुवाएको हो ...
यात्रु आफैँले भाडा तय गर्न मिल्ने इनड्राइभर नेपाल भित्रियो, राइडरले कमिसन तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय राइड शेयरिङ कम्पनी इनड्राइभरले औपचारिक रुपमा नेपालमा समेत आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ । इनड्राइभरले काठमाडौंबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । इनड्राइभरको रियल टाइम डिल्स...
‘बजेटले विद्युतीय गाडीसँगै त्यसमा लाग्ने ब्याट्री, पाटपुर्जा र टायरमा समेत सहुलियत दिनुपर्छ’
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रुपमा नै विद्युतीय सवारीसाधन प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदा बजारमा बिजुलीबाट चल्ने यस्ता सवारी साधनको माग समेत ह...
ह्वावेले तोड्यो लाइका क्यामेरासँगको सहकार्य
काठमाडौं । साओमीसँग सहकार्यको सम्झौता गरेपछि ह्वावेले लाइकासँगको आफ्नो सहकार्यमा पूर्णविराम लगाएको छ । केही दिनअगाडि मात्र साओमीले लाइकासँगको आफ्नो सहकार्य घोषणा गरेको थियो । लाइकासँगको सहकार्यमा ...
फ्री फायर नेपाल च्याम्पियनशिप हुँदै, सबै खेलाडीले खेल्न पाउने
काठमाडाैं । नेपाली फ्री फायर प्लेयरलाई लक्षित गर्दै गरिना फ्री फायरले ‘फ्री फायर नेपाल च्याम्पियनशिप’ आयोजना गर्ने भएको छ । यससँगै केही वर्षदेखि नेपाली प्लेयरहरुले गरिनासँग राख्दै आएकाे आधिकारिक प्...